PressReader - Grocott's Mail: 2018-08-24 - Irhodes ne-as­supol zinikeza ngeelokhwe kwisikolo sasentsika
Irhodes ne-as­supol zinikeza ngeelokhwe kwisikolo sasentsika
Grocott's Mail - 2018-08-24 - NEWS - NGUTOLAKELE SILO
Iqela elikhokhele aba­fundi kwiyu­ni­vesithi yaser­hodes (Stu­dent Rep­re­sen­ta­tive Coun­cil-src) libam­bisene nenkam­pani yakwa-as­supol linikeze ngeelokhwe ze­ma­tric Farewell kubant­wana be­banga leshumi lasentsika Se­condary School er­hini ngol­we­sine umhla we-16 kweyethupha kulo nyaka wama-2018. Eli ny­ath­elo likhokhelwa ngu­u­nathi Mabukane weli qela ok­wisih­lalo sokuthatha in­x­ax­heba ku­luntu. Lo kam­abukane wakuqala oku ngonyaka wama-2014 waze kulo nyaka waquka iqela lakhe LE-SRC kwakunye nenkam­pani i-as­supol.
“Sikubona kubalulek­ile ukuba la magqiyazana nazi­inkokheli zan­gomso azive ebalulek­ile kwaye en­e­sithozela xa esiya kwima­tric dance yawo,” ut­shilo umongameli weli qela likhokhele aba­fundi kwiyu­ni­vesithi yaser­hodes, unhlaka­nipho Mahlangu. Umahlangu uku­thethe oku evuy­isana ek­wan­coma aba ba­fundi be­banga leshumi ngelithi kwi­imeko aba­jon­gene nazo emva emakhaya ku­luchu­lumanco ukuba bafike kweli nqan­aba ebo­mini babo. “Siy­ath­emba ke ukuba kwiminyaka em­balwa ezayo iya kube inini ababuya bazokuphisa ngeelokhwe,” ut­shilo umahlangu. Eli ny­ath­elo liqokelele iilokhwe ezin­gapha kwama-35. Oku kwen­zeke ngokuseben­zisa amakhasi onxe­belel­wano, apho athe um­sebenzi we-as­supol, umam’ ufifi Mom­pati abone umb­halo kam­abukane ngeli ny­ath­elo. “Ingum­man­gal­iso in­dlela esi­wanyashayo am­ath­uba ok­wenza in­guqu siseben­zisa ama­jelo anje ngala amakhasi onxe­belel­wano,” ut­shilo umom­pati onethemba lokuba baza kubam­bisana ne­sikolo uk­wenza okun­gaphezulu koku kwiminyaka ezayo.
“Nje ngaba­fundi be­banga le-10, sisuku ku­makhaya ahluk­i­leyo kwaye abanye bethu bebengazukuya kwi­farewell yethu kuba akukho mali yoko emakhayeni ethu,” ut­shilo um­fundi we­sikolo sasentsika nongu­mongameli kwiqela elikhokhele aba­fundi, usiviwe Madondo. In­qu­nunu yesi sikolo umam’ umadeleine Schoe­man iqh­wa­bele izandla eli ny­ath­elo ngelithi “liza ku­nika in­y­wheba yokuba aba­fundi babe nako ukuba baye nabo kwi-farewell yabo”.
“Siza kuqhuba nokuqokelela ezi lokhwe ‘de ku­fike umhla wabo we-farewell ngenyanga yed­warha kwaye sikwacela na­bantu ukuba banikeze ngoko ba­nako,” ivale ngat­shoyo int­loko yeli ny­ath­elo, um­abukane.